Fahaleovantena Malagasy – feno 59 taona ! – Blaogin'i Voniary
59 taona lasa izay no nahazoan’ny Malagasy ny fahaleovantenany. Raha tsiahivina kely ara-tantara dia ny 26 Jona 1960 no nanambarana fa mahaleo tena tanteraka i Madagasikara.
Tena fahaleovantena marina ve ?
Raha iverenana kely fotsiny ny lasa ara-tantara dia efa 65 taona no nanjanaka antsika ny Frantsay ka namela antsika hanana fahaleovantena ny 26 Jona 1960. Ny mampametra-panotaniana anefa ankehitriny dia ny hoe tena fahaleovantena marina ve no azontsika nandritra izay 59 taona izay ? Toa mbola betsaka aza ny zavatra iankinantsika amin’ireo vahiny. Marina fa mariky ny fahaleovantena ny fananana ny sainam-pirenena (fotsy,mena,maitso), ny hiram-pirenena,sns… Fa saingy, na ananantsika aza ireo rehetra ireo tsy mbola mahaleo tena tanteraka isika fa mbola misy ihany ireo zavatra iankinantsika.
Maro amintsika ny mety hilaza fa vokatry ny fitondrana nisy hatrizay no nahatonga antsika mbola miankin-doha hatramin’izao. Azo ekena ihany hoe samy manana ny lesoka nataony ny mpitondra tsirairay avy kanefa na dia teo aza izany dia samy manana fahadisoana avokoa na izy ireo na isika rehetra. Ny antony ? Very tao anatin’ny fanjanahan-tany avokoa ny toe-tsaina maha-Malagasy ka fony vao nahazo ny fahaleovantena isika dia lasa tsy mahay afa-tsy ny manimba, mamotika ary mangalatra ny zava-bitantsika Malagasy ihany. Noho tsy fitovian-tsaina sy figafiana tsotra izao ho anaovana izany, hany ka lasa miankina amin’ny vahiny isika ny amin’ny hamerenana ireo rehetra ireo noho ny hamaivanan’ny saintsika fotsiny ihany.
Ny fomba fiteny
Ny Amerikanina rehefa miresaka dia teny anglisy no ampiasainy, ny Frantsay rehefa miresaka dia teny frantsay no hiresahany, fa isika Malagasy kosa rehefa miresaka amin’ny Malagasy toa antsika ihany dia sady amin’ny teny gasy no amin’ny teny frantsay izany hoe manafangaro vary amin’akotry. Aiza ho aiza amin’izany kay ilay antsoina hoe fahaleovantena raha mbola mampiasa fiteny hafa ankoatran’ny fitenin-drazantsika isika ?
Eto amin’ny sehatry ny fivoarana indray dia misy ihany ireo Malagasy sasany izay manam-paniriana ny hitondra ny lazan’ny Madagasikara eran-tany. Ny olana anefa dia rehefa misy ny toy ireny dia misy foana ireo Malagasy mahasahy manohitra azy ireny sy mahasahy milaza mihitsy aza hoe : » Tsy misy Malagasy mahavita ny vitan’ireo vahiny ireo izany « . Vokatr’izany, lasa vitsy sisa ny Malagasy sahy manandratra ny lazan’i Madagasikara. Ny ankamaroan’izy ireo dia mipetraka any ivelany avokoa fa tsy mipetraka eto Madagasikara ka mizaka ny zom-pirenena hafa mba afahany manandratra an’ny Madagasikara. Tsy azo lazaina ho mariky ny fahaleovantena mihitsy ny fanakanana ny Malagasy mpiray tanindrazana amintsika tsy handroso sy hampivoatra ny fireneny.
Raha fintinina araka izany dia tsy mbola ao amintsika tsirairay avy izany hoe fahaleovantena izany ary mbola azo lazaina fa tsy mahaleo tena tanteraka ny Malagasy. Koa andeha ary isika rehetra hiara-hientana ny amin’ny famrenenana tanteraka ny fahaleovantenan’ny Malagasy fa izany no tena afahana manarina tanteraka ny firenentsika.
fahaleovantena, fanagasiana ny toe-tsaina, fandrosoana, fitiavan-tanindrazana, fivoarana, teny gasy, teny malagasy